Gadra nitsoaka teny Antanimora : Voasambotry ny zandary I Raharijaona Solofoniaina -
AccueilSongandinaGadra nitsoaka teny Antanimora : Voasambotry ny zandary I Raharijaona Solofoniaina
Gadra nitsoaka teny Antanimora : Voasambotry ny zandary I Raharijaona Solofoniaina
Telo andro aty aoriana, dia nahitàna mangirana ny fikarohana ireo gadra telo lahy nitsoaka ny fonjan’Antanimora ny asabotsy alina lasa teo. Fantatra fa tra-tehaky ny zandary teny Andriantany Ambohidratrimo omaly tamin’ny 07 ora maraina , i Raharijaona Solofoniaina, iray tamin’ireo voafonja telo nandositra. Araka ny loharanom-baovao avy amin’ny tomponandraikitry ny serasera eo anivon’ny zandarimariam-pirenena, ny kaomanda Herilalariana Andrianarisaona, dia tany amin’ny tranon’ny dadabeany ity farany no niafina ary teo am-pangalàna vilona teny an-tanimboly izy no noraisim-potsiny. “Rehefa nosamborina izy dia niaiky fa izy marina ilay gadra nifampitadavana na dia tsy nanana ny sariny aza ny zandary”, hoy ny fanampim-panazavàna . Raha ny voalazan’ity tomponandraikitra ity ihany, dia niainga tany amin’ny borigady Itaosy izay nandray an-tanana ny fanadihadiana talohan’ny nanolorana azy teo anatrehan’ny fampanoavana ny volana aprily 2017, ny fitadiavana ny dosie mahakasika azy. Tamin’ny alalan’izany no nahitàna ny adiresy sy ny toeram-ponenan’ireo havany izay heverina fa mety hiafenany. Rehefa nandeha ny fikaroham-baovao nataon’ny kaomandan’ny borigady eny Ambohidratrimo niaraka tamin’ny fampilazam-baovao avy amin’ny fokonolona eny an-toerana, ny amin’ny fisiana olona vahiny tonga tao amina tokantrano iray, dia izao nahitam-bokany izao.
Marihina fa I Raharijaona Solofoniaina, dia nampidirina am-ponja vonjimaika teny Antanimora ny 05 aprily 2017 noho ny resaka fanolanana ary miandry ny fotoam-pitsaràna azy ny tenany izao nandositra ny fonja izao. Nentina nalaina am-bavany avy hatrany teny amin’ny biraon’ny zandary teny an-toerana izy alohan’ny hanolorana azy indray eo anatrehan’ny fampanoavana , na alohan’ny hamerenana azy eny am-ponja. Tsara tsindriana hatrany mantsy fa misy fiantraikany amin’ny fampitomboana ny sazy tokony hefaina ny fitsoahana ny tranomaizina tahaka izao. Raha gadra efa voatsara izy , dia verenana tsaraina indray ary miampy ny vesatra hanenjehana azy ankoatra izay efa niampangana azy. Nanomboka ny taona 2017, dia fonja miisa dimy izany no vaky teto Madagasikara. Ny fonjan’Ambatondrazaka izay nahalasàna gadra miisa iraika ambin’ny folo no nanomboka izany. Rehefa nandeha ny fikarohana dia saron’ny zandary ny roa tamin’izy ireo raha toa ka mbola hifampitadiavana ireo sivy ambiny. Nanaraka azy ny fonjan’Ankazobe, avy eo ny fonjaben’I Tsiafahy, ary namarana izany tamin’ny taon-dasa, ny tany Ikongo. Ity farany izay tsy hita no hamaritana azy satria raha tsiahivina ny zava-niseho, dia noterena ary ninian’ny fokonolona aman-jatony navoaka tao an-tranomaizina ireo voafonja zato mahery tany an-toerana. Na izany aza anefa dia mbola mitohy hatrany fandraisana andraikitra amin’ ny fikarohana ireo gadra marobe ireo amin’izao fotoana izao.